Farmaajo oo sharaf dhac ka qaaday la kulankii Muuse Biixi - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Farmaajo oo sharaf dhac ka qaaday la kulankii Muuse Biixi
Madaxweynaha Somaliya ayaa markii labaad sharaf dhac weyn ka qaaday la kulanka falaago maalin kasta ku faana inay axmaar walaalo yihiin, cadowgooduna yahay Koofurta Somaliya, burburkii kadibna sheegtay inay xoreeyeen Hargeysa iyo Burco kadibna goosteen.
Waxa been noocaasa lagu dhuraayay dhalintii dhalatey burburka kadib oo hadda badankoodu dareemay in ayna arag wax lagu faano iyo horumar ee kaliya ay arkeen marka Hargeysa dhaafaan inayna jirin wax la yiraa Somalilaan. Waxa dhalintii kadib bilaabeen inay badda isku shubaan Yurubna isku dhiibaan qabiiladii Koofurta dalka ee lagu yiri waa cadowgiina.
Waxa dadka Hargeysa iyo Boorama lacagtoodii xalaasha ahayd looga bedeshay mid Ingiriisku u sameeyay oo bugga oo Hindiya lagu sameeyay, baryahan dambana la soo meydho kadibna doolarka xalaasha ah looga qaato madaarka iyo suuqyada.
Kooxda Muuse Biixi hadda hogaamiyo iyo kuwii ka horeeyayba waxay ku fadhiyeen tuunbo loo dhaafay waxana markasta jirey cadaadis lagu saarayo in wadahadal lala furo. Dawladihii diciifka ahaa ee ka jirey Muqdisho waxa tii uu hogaaminaayay fadhiid Sheekh Shariif ugu dambeyn laga fushaday sheekada ay u bixiyeen Somaliya iyo Somalilaan.
Haddaba Farmaajo oo muddo xilleedkiisu gebagabo marayo ayaa sharafta looga qaaday inuu Muuse Biixi ku martigeliyo Jabuuti. Ujeedada inkastoo ay ka weynayd wuxuu kaliya garan waayay inuu ku adkaysto oo yiraa marxaladan lagu jiro ma haboona inuu dhaco kulan noocaasa waayo waaqica ka jira Hargeysa iyo Burco maaha kii ka jirey dhowr sano kahor.
Ama haddii Somali wadahadlayso meel dalka gudihiisa kaga haboon ma jirto laakiin taasi ma dhicin, wuxuuse fursada saxaafadeed siiyay horjooge aan u qalmin.
Waxa keliya ee Farmaajo amaan maanta ka helay kooxda sida cad faraha ugula jirta dalka ee Maraykanka iyo Ingiriiska oo sheegay inay soo dhaweeyeen kaladirista barlamaanka dalka iyo dib u soo celinta waxay ugu yeereen SAAMILEYDA dalka.